9781523481675 - Fractals Aan Ugu Jeclahay - David E McAdams
precio mínimo: € 37,62, precio máximo: € 37,95, precio promedio: € 37,79
Fractals aan ugu jeclahay David E. McAdams Author - libro nuevo
Tan iyo set Mandelbrot la helay, malaha by Benoit B. Mandelbrot 1979, qurux badan oo inta badan jeer yaab badan oo sawiro fractal ayaa la abuuray. Halkan waa buug ka mid ah qaar ka mid ah kooxaha ugu cadcad aan xal-sare. Juvenile>Juvenile>Juv What Kids Do Play Perf>Juv Performing>Juv Art, CreateSpace Publishing Core >6
Fractals Aan Ugu Jeclahay - Pasta blanda
Paperback, [PU: Createspace Independent Publishing Platform], Tan iyo set Mandelbrot la helay, malaha by Benoit B. Mandelbrot 1979, qurux badan oo inta badan jeer yaab badan oo sawiro fractal ayaa la abuuray. Halkan waa buug ka mid ah qaar ka mid ah kooxaha ugu cadcad aan xal-sare., Art & Design
Tan iyo set Mandelbrot la helay, malaha by Benoit B. Mandelbrot 1979, qurux badan oo inta badan jeer yaab badan oo sawiro fractal ayaa la abuuray. Halkan waa buug ka mid ah qaar ka mid ah… Más…
Tan iyo set Mandelbrot la helay, malaha by Benoit B. Mandelbrot 1979, qurux badan oo inta badan jeer yaab badan oo sawiro fractal ayaa la abuuray. Halkan waa buug ka mid ah qaar ka mid ah kooxaha ugu cadcad aan xal-sare. Juvenile>Juvenile>Juv What Kids Do Play Perf>Juv Performing>Juv Art, CreateSpace Publishing Core >6<
(aprox. € 37,62)
Paperback, [PU: Createspace Independent Publishing Platform], Tan iyo set Mandelbrot la helay, malaha by Benoit B. Mandelbrot 1979, qurux badan oo inta badan jeer yaab badan oo sawiro fra… Más…
Paperback, [PU: Createspace Independent Publishing Platform], Tan iyo set Mandelbrot la helay, malaha by Benoit B. Mandelbrot 1979, qurux badan oo inta badan jeer yaab badan oo sawiro fractal ayaa la abuuray. Halkan waa buug ka mid ah qaar ka mid ah kooxaha ugu cadcad aan xal-sare., Art & Design<
Fractals Aan Ugu Jeclahay
Detalles del libro - Fractals Aan Ugu Jeclahay
EAN (ISBN-13): 9781523481675
Editorial: CreateSpace Publishing Core >6
Libro en la base de datos desde 2020-03-19T01:07:18-06:00 (Mexico City)
Página de detalles modificada por última vez el 2020-06-10T06:49:49-05:00 (Mexico City)